ကလေးတွေလိမ်ပြောတတ်နေတာကို မိဘတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဘယ်လိုကိုင်တွယ်မလဲ ? – CantWait2Say
ကလေးတွေလိမ်ပြောတတ်နေတာကို မိဘတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဘယ်လိုကိုင်တွယ်မလဲ ?
တစ်ဘ၀လုံး မလိမ်မညာပဲ ရှင်သန်နေထိုင်နေတဲ့လူရယ်လို့မရှိပါဘူး။ မုသားမပါ လင်္ကာမချောဆိုသလိုပဲ လူသားတွေအသက်ရှင်နေသရွေ့ လိမ်ညာစကားတွေကတော့ ပြောနေဦးမှာပါပဲ။ နေ့စဉ် နေ့တိုင်း လူလိမ်တွေနဲ့ တွေ့နေရတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ကလေးတွေရော ဒီလိုလူလိမ်လေးတွေဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် သင်ဘာလုပ်မလို့လဲ ?
(၁) ကလေးတွေဟာ အကျိုးဆက်ကိုသိနေတယ်…
ကလေးတွေ မကြာခဏလိမ်နေတယ်ဆိုတာ အမှန်တိုင်းပြောရင်
အပြစ်ပေးခံရမယ်ဆိုတာ သူတို့သိနေလို့ပဲ။ သင့်အနေနဲ့ သူတို့ကိုအမှန်တိုင်းပြောထွက်လာအောင် ချော့သလှည့်၊ ခြောက်သလှည့်လုပ်တတ်ရမယ်။ အပြစ်ပေးတဲ့အခါလည်း အရမ်းမပြင်းထန်နဲ့ပေါ့။ ကလေးလည်း ဒီအတွက် မကြောက်တော့ဘူး။
(၂) ကလေးတွေက သင့်ကိုစိတ်မကောင်းမဖြစ်စေချင်ဘူး
ကလေးတွေက သင့်ကိုချစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပဲ သင့်ကိုဝမ်းမနည်းစေချင်ဘူး။
သူတို့အမှန်တိုင်းပြောလိုက်လို့ သင့်ရဲ့ တုံ့ပြန်မှုက အရမ်းပြင်းထန်သွားရင် သူတို့ပိုဝမ်းနည်းရတယ်။ အမှန်တိုင်းပြောတာကိုပဲ ကျေးဇူးတင်ပြီး
အဲ့အတွက် သင်ခန်းစာယူနိုင်အောင် ချော့သင်ပါ။ သင့်ကလေးလည်း
နှစ်ဦးနှစ်ဖက် နာကျင်အောင်လုပ်မယ့်ကိစ္စတွေ တဖြည်းဖြည်းရှောင်တတ်လာမယ်။
(၃) သူတို့မလိမ်ရင်တောင် လေထဲတိုက်အိမ်ဆောက်တတ်ကြတယ်..
တစ်ခါတစ်လေ ကလေးတွေဟာ သူတို့ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေပြည့်ဝအောင် အမှားတွေပြုလုပ်တတ်ကြတယ်။ သူတို့ရဲ့ စွန့်စားခရီးစဉ်တွေအကြောင်း သင့်ကို သူတို့ပြောလိမ့်မယ်။ အခြားလူတွေကိုလည်း အစ်ကိုမရှိတာကို ရှိပါတယ်ဆိုပြီး ပြောနေတဲ့အခါမျိုးဆို နောက်တခါ ဒီလိုမျိုး မပြောအောင်
နူးညံ့စွာသင်ပေးပါ။ သူတို့စိတ်ကူးယဉ်တတ်တာပါ… တဖြည်းဖြည်းအရွယ်ရောက်လာရင်တော့ ဒီအကျင့်လေးတွေ ပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်။
(၄) မမှတ်မိတဲ့အခါလည်း သူတို့လိမ်ပြီးပြောတတ်ကြတယ်..
ကလေးတွေဟာ သူတို့ယုံကြည်ထားတဲ့အရာတွေ ၀ိုးတ၀ါး မပြတ်သားဖြစ်လာရင် အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး လိမ်တတ်ကြပါတယ်။
သူတို့သိထားတာ မေ့သွားရင် ဘာပြောရမှန်းမသိတဲ့အခါ လိမ်တတ်ကြတယ်။
ဒီလိုမျိုး လိမ်ပြောတတ်တာကို မစိုးရိမ်ပါနဲ့။ စိတ်ရှည်ရှည်ထားပြီး ကလေးရဲ့ အပြုအမူပေါ် နားလည်အောင်ကြိုးစားပါ။ ငယ်နေတုန်းအရွယ်ဆို အကျင့်လေးတွေ ပြင်လို့ရမှာပါ။
(၅) လိမ်ပြောခြင်းက ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုလို့ သူတို့တွေးမှတ်ကြတယ်..
လိမ်ပြောလိုက်တာက မှန်တယ်လို့ သူတို့လေးတွေထင်တတ်တယ်။ ဘွားဘွားရဲ့ ခြေအိတ်ကိုဝတ်ရလို့ သူတို့ပျော်တယ်လို့ထင်ရပေမယ့် အတွင်းစိတ်ထဲမှာတော့ ဒီလိုခြေအိတ်မျိုးလက်ဆောင်တော့မလိုချင်ဘူးလို့
တွေးချင်တွေးနေနိုင်တယ်။ သင့်ကလေးကို ဘယ်လိုပုံစံဖြစ်အောင် ထိန်းကြောင်းမလဲဆိုတာ သင့်အပေါ်မှာပဲမူတည်ပါတယ်။
(၆) မှန်ကန်တဲ့အဖြေအတွက် သူတို့ပရိုဂရမ်တွေဆွဲနေတယ် ..
မိဘတွေက ကလေးတွေကို မေးခွန်းတစ်ခုထက်ပိုပြီး မေးတတ်ကြပါတယ်။
ဥပမာ.. သင်က အရသာရှိလားလို့မေးရင် သူ့ပန်းကန်ထဲရောက်နေတဲ့အစားစားတွေက သူမစားချင်တာတွေဖြစ်နေတတ်တယ်။ အရသာရှိတယ်.. မရှိဘူး ပြောတာကအစ ကလေးတစ်ယောက်က လိမ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ အဆင်မပြေဘူး။ ချက်ချင်း ထိုပြဿနာကိုရှင်းပါ။ အမှန်တိုင်းပြောလိုက်အောင် လုပ်ဖို့ သင့်အပေါ်မူတည်ပါတယ်။
(၇) သင့်ကိုယ်သင်လည်း လိမ်နေတဲ့အခါတွေရှိ်တယ်မလား …
မိဘဆိုတာ ကလေးတွေရဲ့ လက်ဦးဆရာပါ။ အလိမ်ညာတွေကြားမှာ ရှင်သန်ကြီးပြင်းလာရင် ကလေးတစ်ယောက်ဟာ အမှန်တိုင်းပြောတာကို ရပ်တန့်ပစ်လိမ့်မယ်။ ဖြေရှင်းနည်းကတော့ မိဘကိုယ်တိုင်က ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်အရင်ရိုးသားအောင် ပြုပြင်နေထိုင်ဖို့လိုပါတယ်။
(၈) မကောင်းတဲ့အရာပေါ် သူတို့စိတ်ရောက်ရင်
မကောင်းတဲ့အရာတွေပေါ် သင့်ကလေးစိတ်ဝင်စားနေရင် မအော်ပစ်လိုက်ပါနဲ့။ အပြစ်မတင်ပါနဲ့။ ဘယ်အရာက မှန်ပြီး ဘယ်အရာကဆိုးလဲဆိုတာ သူတို့ကွဲကွဲပြားပြား မသိဘဲနေလိမ့်မယ်။
အမှန်တိုင်းပြောပြလိုက်ပါ။ သူတို့အသက်ရွယ်နဲ့ သိသင့်သိထိုက်တာတွေကို
ပြောပြပေးပါ။ ဘယ်အရာက မကောင်းဘူး.. ဘာကတော့ အပြစ်ရှိတယ်ဆိုတာ သေချာရှင်းပြပါ။ အရေးကြီးတာကိုသေချာနားလည်ထားမှ သူတို့ကြီးပြင်းလာတဲ့အခါ ဆင်ခြင်နိုင်မယ်။
ကလေးတှလေိမျပွောတတျနတောကို မိဘတဈယောကျအနနေဲ့ ဘယျလိုကိုငျတှယျမလဲ ?
တဈဘဝလုံး မလိမျမညာပဲ ရှငျသနျနထေိုငျနတေဲ့လူရယျလို့မရှိပါဘူး။ မုသားမပါ လင်ျကာမခြောဆိုသလိုပဲ လူသားတှအေသကျရှငျနသေရှေ့ လိမျညာစကားတှကေတော့ ပွောနဦေးမှာပါပဲ။ နစေ့ဉျ နတေို့ငျး လူလိမျတှနေဲ့ တှနေ့ရေတယျ။ ဒါပမေယျ့ ကိုယျ့ကလေးတှရေော ဒီလိုလူလိမျလေးတှဖွေဈနမေယျဆိုရငျ သငျဘာလုပျမလို့လဲ ?
(၁) ကလေးတှဟော အကြိုးဆကျကိုသိနတေယျ…
ကလေးတှေ မကွာခဏလိမျနတေယျဆိုတာ အမှနျတိုငျးပွောရငျ
အပွဈပေးခံရမယျဆိုတာ သူတို့သိနလေို့ပဲ။ သငျ့အနနေဲ့ သူတို့ကိုအမှနျတိုငျးပွောထှကျလာအောငျ ခြော့သလှညျ့၊ ခွောကျသလှညျ့လုပျတတျရမယျ။ အပွဈပေးတဲ့အခါလညျး အရမျးမပွငျးထနျနဲ့ပေါ့။ ကလေးလညျး ဒီအတှကျ မကွောကျတော့ဘူး။
(၂) ကလေးတှကေ သငျ့ကိုစိတျမကောငျးမဖွဈစခေငျြဘူး
ကလေးတှကေ သငျ့ကိုခဈြပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ပဲ သငျ့ကိုဝမျးမနညျးစခေငျြဘူး။
သူတို့အမှနျတိုငျးပွောလိုကျလို့ သငျ့ရဲ့ တုံ့ပွနျမှုက အရမျးပွငျးထနျသှားရငျ သူတို့ပိုဝမျးနညျးရတယျ။ အမှနျတိုငျးပွောတာကိုပဲ ကြေးဇူးတငျပွီး
အဲ့အတှကျ သငျခနျးစာယူနိုငျအောငျ ခြော့သငျပါ။ သငျ့ကလေးလညျး
နှဈဦးနှဈဖကျ နာကငျြအောငျလုပျမယျ့ကိစ်စတှေ တဖွညျးဖွညျးရှောငျတတျလာမယျ။
(၃) သူတို့မလိမျရငျတောငျ လထေဲတိုကျအိမျဆောကျတတျကွတယျ..
တဈခါတဈလေ ကလေးတှဟော သူတို့ဖွဈခငျြတဲ့ဆန်ဒတှပွေညျ့ဝအောငျ အမှားတှပွေုလုပျတတျကွတယျ။ သူတို့ရဲ့ စှနျ့စားခရီးစဉျတှအေကွောငျး သငျ့ကို သူတို့ပွောလိမျ့မယျ။ အခွားလူတှကေိုလညျး အဈကိုမရှိတာကို ရှိပါတယျဆိုပွီး ပွောနတေဲ့အခါမြိုးဆို နောကျတခါ ဒီလိုမြိုး မပွောအောငျ
နူးညံ့စှာသငျပေးပါ။ သူတို့စိတျကူးယဉျတတျတာပါ… တဖွညျးဖွညျးအရှယျရောကျလာရငျတော့ ဒီအကငျြ့လေးတှေ ပြောကျသှားပါလိမျ့မယျ။
(၄) မမှတျမိတဲ့အခါလညျး သူတို့လိမျပွီးပွောတတျကွတယျ..
ကလေးတှဟော သူတို့ယုံကွညျထားတဲ့အရာတှေ ၀ိုးတဝါး မပွတျသားဖွဈလာရငျ အခွအေနပေျေါမူတညျပွီး လိမျတတျကွပါတယျ။
သူတို့သိထားတာ မသှေ့ားရငျ ဘာပွောရမှနျးမသိတဲ့အခါ လိမျတတျကွတယျ။
ဒီလိုမြိုး လိမျပွောတတျတာကို မစိုးရိမျပါနဲ့။ စိတျရှညျရှညျထားပွီး ကလေးရဲ့ အပွုအမူပျေါ နားလညျအောငျကွိုးစားပါ။ ငယျနတေုနျးအရှယျဆို အကငျြ့လေးတှေ ပွငျလို့ရမှာပါ။
(၅) လိမျပွောခွငျးက ယဉျကြေးမှုတဈခုလို့ သူတို့တှေးမှတျကွတယျ..
လိမျပွောလိုကျတာက မှနျတယျလို့ သူတို့လေးတှထေငျတတျတယျ။ ဘှားဘှားရဲ့ ခွအေိတျကိုဝတျရလို့ သူတို့ပြျောတယျလို့ထငျရပမေယျ့ အတှငျးစိတျထဲမှာတော့ ဒီလိုခွအေိတျမြိုးလကျဆောငျတော့မလိုခငျြဘူးလို့
တှေးခငျြတှေးနနေိုငျတယျ။ သငျ့ကလေးကို ဘယျလိုပုံစံဖွဈအောငျ ထိနျးကွောငျးမလဲဆိုတာ သငျ့အပျေါမှာပဲမူတညျပါတယျ။
(၆) မှနျကနျတဲ့အဖွအေတှကျ သူတို့ပရိုဂရမျတှဆှေဲနတေယျ ..
မိဘတှကေ ကလေးတှကေို မေးခှနျးတဈခုထကျပိုပွီး မေးတတျကွပါတယျ။
ဥပမာ.. သငျက အရသာရှိလားလို့မေးရငျ သူ့ပနျးကနျထဲရောကျနတေဲ့အစားစားတှကေ သူမစားခငျြတာတှဖွေဈနတေတျတယျ။ အရသာရှိတယျ.. မရှိဘူး ပွောတာကအစ ကလေးတဈယောကျက လိမျနတေယျဆိုရငျတော့ အဆငျမပွဘေူး။ ခကျြခငျြး ထိုပွဿနာကိုရှငျးပါ။ အမှနျတိုငျးပွောလိုကျအောငျ လုပျဖို့ သငျ့အပျေါမူတညျပါတယျ။
(၇) သငျ့ကိုယျသငျလညျး လိမျနတေဲ့အခါတှရှျေိတယျမလား …
မိဘဆိုတာ ကလေးတှရေဲ့ လကျဦးဆရာပါ။ အလိမျညာတှကွေားမှာ ရှငျသနျကွီးပွငျးလာရငျ ကလေးတဈယောကျဟာ အမှနျတိုငျးပွောတာကို ရပျတနျ့ပဈလိမျ့မယျ။ ဖွရှေငျးနညျးကတော့ မိဘကိုယျတိုငျက ကိုယျ့ကိုယျကိုယျအရငျရိုးသားအောငျ ပွုပွငျနထေိုငျဖို့လိုပါတယျ။
(၈) မကောငျးတဲ့အရာပျေါ သူတို့စိတျရောကျရငျ
မကောငျးတဲ့အရာတှပေျေါ သငျ့ကလေးစိတျဝငျစားနရေငျ မအျောပဈလိုကျပါနဲ့။ အပွဈမတငျပါနဲ့။ ဘယျအရာက မှနျပွီး ဘယျအရာကဆိုးလဲဆိုတာ သူတို့ကှဲကှဲပွားပွား မသိဘဲနလေိမျ့မယျ။
အမှနျတိုငျးပွောပွလိုကျပါ။ သူတို့အသကျရှယျနဲ့ သိသငျ့သိထိုကျတာတှကေို
ပွောပွပေးပါ။ ဘယျအရာက မကောငျးဘူး.. ဘာကတော့ အပွဈရှိတယျဆိုတာ သခြောရှငျးပွပါ။ အရေးကွီးတာကိုသခြောနားလညျထားမှ သူတို့ကွီးပွငျးလာတဲ့အခါ ဆငျခွငျနိုငျမယျ။
ဟောလိဝုဒ် ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးတွေရဲ့ Logo များရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်
ဟောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေရဲ့ အစမှာ ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချိရေးပုံတွေပါလာပြီး ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ Logo တွေကို တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီ Logo တွေရဲ့ သမိုင်းကြောင်းကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ 1 DreamWorks Pictures DreamWorks Pictures မှာ ကလေးတစ်ယောက်က တခြမ်းပဲ့လပေါ်ထိုင်ရင်း ငါးထိုင်မျှားနေတဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်။မူရင်းကို ဒီဇိုင်းပညာရှင် Robert Hunt က …
အုန်းပင် နဲ့ အုန်းသီးရဲ့ အသုံးဝင်တဲ့အချက်နဲ့ ဖန်တီးမှုများ
အုန်းပင် နဲ့ အုန်းသီးရဲ့ အသုံးဝင်တဲ့အချက်နဲ့ ဖန်တီးမှုများ 10 အုန်းရေကို တချို့သော လူနာတွေ ဆေးသွင်းတဲ့အခါ ရောပြီး ထိုးသွင်းပေးတတ်ပါတယ်။သွေးတွင်း သွေးဆဲလ်တွေ အရေးပေါ် သွေးကျဲအောင်ပြုလုပ်ပေးတာဖြစ်ပြီး ရေဓာတ်ခန်းသူတွေကိုလည်း အုန်းရေတိုက်ပြီး ကုသတာဖြစ်ပါတယ်။9ပထမကမ္ဘာစစ်မှာ ဂတ်စ်ကိုကာကွယ်ဖို့ မျက်နှာဖုံးထုတ်လုပ်မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။တခြားသော ဓာတ်ငွေ့ဗုံးတွေအတွက်ပါ ဒီမျက်နှာဖုံးကို အသုံးပြုကြတာဖြစ်ပြီး …
ခေတ်ရဲ့ ပျက်စီးမှုကို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းဖော်ပြထားတဲ့ ကာတွန်းပုံတွေ လက်ရှိခေတ်ရဲ့ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အနေအထားကို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်နိုင်ဖို့နဲ့ ဆင်ခြင်နိုင်ဖို့ အနုပညာရှင်တွေက အမြဲမပြတ်ဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ ဖန်တီးမှုဟာ တကယ်ပဲ ခေတ်ရဲ့ အခြေအနေကို သရော်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်လို့ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။သူတို့သရော်မှုကို ကိုယ်တွေးထင်မိသလိုသာ ရေးသားဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီး မိမိ စိတ်ကြိုက် ပုံတွေတိုင်းမှာ ခေါင်းစဉ်တပ်ပြီး တွေးယူနိုင်ပါတယ်။ 1. …